Dad la il daran Cudurka Duumada oo kusoo badanaya Gobolka Bari Dhageyso
Updated About:141 days ago 0
Dr.Cali Cabdullaahi Warsame
Dad la il daran Cudurka Duumada oo kusoo badanaya Gobolka Bari.
Dadka uu soo ritay Cudurka Duumada ayaa tiradoodu ay kasii badanaysaa Maalinba Maalinta ka danbaysa waxaa ka hadlay Xaaladaani Wasiirka Caafimaadka ee Puntland.
Wasiirka Caafimaadka Puntland Dr.Cali Cabdullaahi Warsame ayaa Shir jaraaid oo qabtay waxaa uu kaga hadlay Cudurka Duumada ama Maleriyada oo fara ba’an ku haya Bulshada Gobolka Bari.
Shirkaan Jaraaid ayaa waxaa goob joog ka ahaa Wasiirad kuxigeenada Caafimaadka Puntland , Ururka Dhakhaatiirta ee Gobolka Bari qaar kamida Hay’adaha ka hawlgala Puntland iyo Bahda Saxaafada.
Wasiirka ayaa waxaa uu sheegay in ilaa iyo haatan inta la ogyahay ay 51 Qof la Jiifaan Cudurkaas Cisbitaalka Guud ee Magaalada Bosaso waxaana uu intaasi kudaray in hada ka horay aysan dhicin Tiro dad intaan le eg in la hele oo Cudurkaani la il daran.
Dr.Cali Cabdullaahi Warsame ayaa waxaa uu sheegay in baaris lasameeyay ayna kaqayb qaateen Baaritaanka Hay’ada WHO iyo Wasaarada Caafimaadka la xaqiijiyay in Cudurkaani uu kusii baahaya Degmada Bosaso ayna jiraan meelo kale oo Cudurkaani uu kajiro.
Dhageyso Shirka Jaraaid ee Wasiirka Cafimaadka Dr.Cali Cabdullaahi Warsame Wasiirka ayaa waxaa uu dadwaynaha udiray Fariin ku aadan in cidii dareenta Calaamadaha Cudurkaani ay iska baaraan Cudurka baaritaanku uu yahay lacag la’aan cidii laga helana ay diyaar utahay Daawadii oo lacag la’aan ah ayna udiyaarisay Wasaarada Caafimaadka iyo Hay’adaha la shaqeeya.
Waxaana Wasiirku uu Dadwaynaha ku baraarujiyay inay sameeyaan ka hortaga Cudurka si uusan uhaleelin isagoo hadalkiisa raaciyay in waxyaabaha Sababa Cudurkaani ay Safka hore kajirto Nadaafad Xumada.
Wasiirka ayaa waxaa uu shaaca ka qaaday in Wasaarada Caafimaadka iyo Maamulka Gobolka ay iska kaashan doonaan sidii looga hortagi lahaa faafitaanka Cudurka waxaana uu sheegay in Dhamaan Hay’adahii Shirka jaraaid kasoo qayb galay ay balan qaadeen inay kaqayb qaadanayaan la tacaalida Cudurkaani sii faafaya.
Sikastaba ha ahaatee waa tiradii ugu badnayn oo Cudurkaani la il daran oo lagu arko Gobolka Bari iyadoo waxyaabaha Cudurkaani Sababay lagu sheegay in ay yihiin Roobabkii badnaa ee ka da’ay Puntland iyo waliba Safarada Koonfurta Dalka ka yimaada oo ay macquul tahay inay ay la socdaan Dad Cudurkaasi qaba.
Cabdiraxmaan Sanka, cabdiraxman_b@hotmail.com